Paracetamol (ပါရာစီတမော) လူပြောများလာပြီ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ပုံပါပို့စ်တခုကို အခုပဲတွေ့ပါတယ်။ (ပါရာစီတမော) ဆေးဟာ ကျွန်တော်တို့ဆေးကျောင်းသားဘဝ ၁၉၇ဝ ဝန်းကျင်၊ ဆေးဝါးဗေဒစာအုပ်ထဲမှာ မထင်မရှားသာပါခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ အသုံးအလွန်များလာတယ်။ ကလေးတွေဆိုရင် မရှိသုံးဆေးတမယ်ဖြစ်လာတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သတိပေးချက်တွေများလာတယ်။ များတယ်ဆိုတာနဲ့ မသုံးနဲ့လို့ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဆေးပညာကို လူမှုရေးကွန်ရက်တွေမှာနဲ့ မီဒီယာမှာ အလွန်အကျွံရေးတာ မဖြစ်သင့်ပါ။
လူတွေဟာ တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါ။ တယောက်တည်းမှာလည်း တချိန်နဲ့တချိန် မတူပါ။ ဥပမာ အသည်းရောဂါမရှိခင်က (ပါရာစီတမော) ကို ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့သုံးတာ အကျိုးများပါတယ်။
(ပါရာစီတမော) ကိုအများကြီးသောက်ရင် အသက်ကိုပင် ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့ လန်ဒန်ကလာတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကဆိုပါတယ်။ အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာ၊ ကိုက်တာ-ခဲတာတွေအတွက် သုံးနေတဲ့ (ပါရာစီတမော) တခုထဲဖြစ်ဖြစ် ပူးတွဲထားတဲ့ ဆေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် များများသောက်ရင် အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ သေနိုင်တာက အသည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့လို့ ဖြစ်တယ်။ မတော်တဆ ဆေးများများ သောက်မိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရာကျပါလိမ့်မယ်။
ဆေးကိုစိတ်ချရတဲ့အဆသောက်ရင် ကိုယ်ခန္ဓာကကောင်းကောင်းကျေချက် လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ လွန်ကဲပြီးသောက်မိရင် မကျေချက်နိုင်တာတွေ စုဝေးပြီးအသည်းကိုထိခိုက်ရာကနေ ပြန်မကောင်းနိုင်တဲ့အထိရောက်စေနိုင်တယ်။
- လူကြီး = 325 to 650 mg ၄ နာရီတကြိမ်။ 500 mg ၈ နာရီတကြိမ်။ တနေ့မှာ4grams ထက်မများစေရ။
- အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ် = 40-60 mg/kg/day ၆ နာရီတကြိမ်။ တနေ့မှာ 3.75 g/day ထက်မများစေရ။
- အသက် ၁၂ နှစ်အောက် 10-15 mg/kg ၆-၈ နာရီတကြိမ်။ တနေ့မှာ 2.6 g/day ထက်မပိုစေရ။
(ပါရာစီတမော) ကို ဆေးကုမ္ပဏီတွေပေးတဲ့ နာမည်တွေက (အေ-တူ-ဇက်) ရှိပါတယ်။
Acamol, Ace +, Acetalgin, Adol, Aldolor, Alvedon, APAP, Apiretal, ApiretalFlas, Atamel, Atasol, Benuron, Biogesic (Myanmar), Buscapina, Calpol, Cemol, Crocin, Dafalgan, Daleron, Dawaya magi, Depon, Dexamol,Dexamol Plus, Dolex, Dolo, Dolgesic, Doliprane, Dolprone, Duiyixian, Efferalgan, Europain, Febrectal, Febrex Plus, Febricet, Febridol, Gelocatil, Gripin, Hedanol, Herron, Influbene, Kafa, Lekadol, Lupocet, Metacin, Mexalen, Milidon, Minoset, Momentum, Napa, Neo-Kiddielets, Pacimol, Pacol, Pamol, Panol, Panado, Panadol, Panamax, Panodil, Para, Paracet, Paracitol, Paralen, Paramed, Paramol, Parol, Perdolan, Perfalgan, Pinex, PyongSuCetamol, Pyrenol (Paracetamol + caffeine), Plicet, Reliv, Rokamol, Sara, Scanol, Tachipirin, Tachipirina, Tafirol, Tapsin, Termalgin, Tempra, Treuphadol, Triaminic, Tylenol, Thomapyrin, Uphamol, Vermidon, Vitamol, Xumadol, Zolben စသည်။
1. Paracetamol no good for back pain ပါရာစီတမော ခါးနာကို မသက်သာ
2. Paracetamol (ပါရာစီတမော)
3. Paracetamol (ပါရာစီတမော) လူပြောများလာပြီ
4. Paracetamol combo drugs (ပါရာစီတမော) ပူးတွဲဆေး သတိပေးချက်
5. Paracetamol Syrup (ပါရာစီတမော) အရည်
6. Paracetamol with Pepsi (ပါရာစီတမော) နဲ့ (ပက်စီ)
7. Pregnancy and Paracetamol (ပါရာစီတမော) နဲ့ ကိုယ်ဝန်
8. Toxic paracetamol ပါရာစီတမော အဆိပ်ဆေးရည်